इन्जिन लागि के कम्बल कम्पनी किन्न? इन्जिन "Avtoteplo" को लागि कम्बल: मूल्य, समीक्षा
आधुनिक इन्जिन पूर्ण केही घण्टा को लागि तल शांत। धेरै हुनत परिवेश तापमान मा निर्भर गर्दछ। थप गम्भीर उत्तरी क्षेत्रहरु कहिलेकाहीं बिहान छ पूर्व-परिचालन हीटर को स्थापना गर्न किन धेरै रिसोर्टमा कार, सुरु गर्न असम्भव छ भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व। तर सिस्टम जो सधैं सही काम गर्दैन, महंगी र जटिल छ। एक छरितो समाधान - इन्जिन लागि कम्बल किन्न। तर पनि यहाँ हामीले विचार केही nuances छन्।
पहिले तपाईं यसलाई यस्तो खरिद महसुस बनाउँछ कि बुझ्न आवश्यक छ। तथ्यलाई कि सधैं तल 20 डिग्री सेल्सियस जाडो घटेको मा तापमान छ। यस्तो अवस्थामा, मोटर र यसको Operable सिस्टम भने, लन्च समस्या हुँदैन। तर रात थर्मामीटर -30 र तल भने, त्यहाँ कार द्वारा काम गर्न जाने छैन, र सार्वजनिक जाने मौका छ।
यो कार इन्जिन लागि कवर किन्न आवश्यक छ, यो सरल कारण लागि हो। यो एकदम गर्मी हानि कम गर्नेछ। उदाहरणका लागि, एल्यूमीनियम सिलेंडर टाउको चाँडै बन्द गर्मी वातावरण गर्न, बरु डाली फलाम भन्दा दिन्छ। यो डाउनटाइम मोटर केही घण्टा भित्र चिसो छ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। वास्तवमा हरेक अनुभवी मोटरहाक्ने व्यक्ति थाह भन्दा राम्रो पूर्ण दुई पूर्ण बिभिन्न कुराहरू cooled रन र अझै पनि न्यानो आन्तरिक दहन इन्जिन छ, छन्।
के निर्माता भन्छन्
उत्पादन र बिक्री कम्पनीहरु avtoodeyal अक्सर बस अचम्मको तथ्याङ्कले नेतृत्व। उदाहरणका लागि, यो अक्सर दहन इन्जिन3पटक ढिलो तल शांत हुनेछ भने छ। यी सूचकहरू को कम्बल धन्यवाद हासिल हुने, कि तर यो एकदम सम्भव छ 1,5-2 समयमा गर्मी घाटा कम गर्न असम्भाव्य छ। त्यसैले, आफ्नो इन्जिन 2-2.5 घण्टा शांत भने, यो सम्भव 4-5 घण्टा यो आंकडा वृद्धि छ। यो भन्दा अवस्थामा पर्याप्त छ।
इन्जिन कम तापमान को प्रभाव सन्दर्भमा, त्यसपछि हामी यसलाई एक सानो कम छलफल गरिनेछ। avtoodeyalo मा उच्च तापमान को प्रभाव धेरै रुचि। धेरै किन avtoodeyala प्राप्त छैन र किनभने सम्भव आगो तिनीहरूलाई प्रयोग नगर्नुहोस् छ जो आन्तरिक दहन इन्जिन, गर्मी को एक ठूलो राशि, को सञ्चालन समयमा। तर यो थप पूर्वाग्रह छ। इन्जिन कक्ष साधारण कम्बल, हो, यो मामला मा आगो बढ्छ जोखिम एकदम कवर भने।
यो मोटर कार कम्बल लागि के गरेको छ
आधार ग्लास फाइबर रूपमा प्रयोग वा महसुस आधुनिक निर्माताहरु। उत्तरार्द्ध एकदम को ज्वलन तापमान बढ्छ जो एक विशेष पूरण, छ। गुणस्तर उत्पादनहरु 1000 डिग्री सम्म सामना गर्न सक्छन्। यदि पहिले नै 300 डिग्री सेल्सियस मा पूर्व-उपचार छैन, बल्न उहाँले, लाग्यो। अक्सर, निर्माता silicic (basalt) ऊन प्रयोग गर्नुहोस्। यो घरहरू थर्मल इन्सुलेशन लागि निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ। तर यो थप रुचि ग्लास मानिन्छ। यो लगभग burn छैन।
तर इन्जिन कक्ष मा तापमान नाघ्नु हुँदैन 100 डिग्री सेल्सियस। यो सरल कारण लागि, महसुस र फाइबर ग्लास दुवै प्रयोग पूर्ण सुरक्षित गर्न सकिँदैन। अधिक कि subzero तापमान पछि।
इन्जिन "Avtoteplo" को लागि कम्बल: समीक्षा
यो कार हीटर चालक बीच उच्च मांग छ। उहाँले घरेलू उत्पादन यसको मूल्य असर गर्छ कि। साथै, एक राम्रो खाता avtoodeyalo यस्तो। वाहन वजन आधारमा अंक परिवर्तन हुन सक्छ। औसत मा, बारे 4-5 किलोग्राम।
मोटर चालकहरुलाई मिसिन धेरै छिटो माथि heats, र यसैले इन्धन खपत अलि कम छ भन्छन्। स्टोभ को दक्षता पनि कारण शक्ति एकाइ बढी तीव्र वार्मिंग गर्न बढ्छ। इन्जिन लागि कम्बल "Avtoteplo", समीक्षा हामी विचार गर्दै छन् जो, विद्युत विशेषताहरु छ। यो पूर्ण छोटो सर्किट को संभावना समाप्त। धेरै यो निर्माता कम से कम गर्मी बनाएको छ भन्छन्। इन्सुलेशन सजिलै यस्तो जीवन भर तेल र जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु omyvayki प्राविधिक तरल पदार्थ, संग सम्पर्क सामना। सामान्य मा, धेरै अत्यधिक किनभने कम लागत र उच्च गुणवत्ता उत्पादनहरु को "Avtoteplo" प्रशंसा गरे।
को लाभ मा
अब हामी विशेष "Avtoteplo" मा, कुनै पनि avtoodeyalo हुनुपर्छ भन्ने मुख्य लाभ छलफल गरिनेछ। पहिलो, माथि उल्लेख, यो मोटर को गर्मी राख्न छ। फलस्वरूप, एकदम चिसो सुरु संख्या कम। बारी मा यो एकदम मोटर जीवन विस्तार। चिसो आन्तरिक दहन इन्जिन स्नेहन सिस्टम आदर्श देखि टाढा छ। तेल पनि बाक्लो छ, यो सबै दल्नु भागहरु फैलाउन समय छैन, यो त्वरित लगाउन जान्छ।
साथै, यो इन्धन मा सुरक्षित गर्न सम्भव छ। यो ताप समय कम छ, र फलस्वरूप कम पेट्रोल वा डिजेल सञ्चालन तापमान हासिल गर्न आवश्यक तथ्यलाई कारण छ। इन्जिन "Avtoteplo" को लागि कम्बल, मूल्य बारे 1500 rubles छ, इन्धन बचत र कार शक्ति एकाइहरु को जीवन को विस्तार, र यो महत्वपूर्ण छ।
बेफाइदा यो मोटर गरम करना र तेल क्षमता स्नेहन कम गर्न सम्भव छ कि छन्। तर यस कम्बल को प्रयोग कुनै पनि अर्थमा बनाउन गर्दैन जब शून्य माथि तापमान, मा सञ्चालन गर्न थप छ। यसबाहेक, यो क्षति मोटर। यो avtoodeyala तापमान प्रयोग गर्दा इन्जिन कक्ष मा rises कि तार्किक छ। यो पेट्रोल Boiling गर्न सक्छ। विशेष, यो समस्या सुसज्जित एक कार्बोरेटर संग मिसिन मा हुन्छ।
सामान्य ठंडा अनुकूल Boiling पेट्रोल को कमी र जो गतिशीलता असर बरफको शक्ति, lowers। उच्च तापमान कि छोटो-सर्किट सुनिश्चित गर्दछ। तर यो केवल पुरानो कार लागि विशिष्ट छ जो ताराहरु, को मामला मा हुन्छ।
सामान्यतया यो कुनै समस्या छ। इन्जिन मा एक कम्बल खरिद, जो को मूल्य प्रयोग आकार र सामाग्री मा निर्भर गर्दछ। रेशा अधिक महंगा छ, तर यसको दक्षता धेरै उच्च छ। स्थापना अति सरल छ। यो रजाई लागि सफासँग इन्जिन कक्ष मा फिट। Podgibayutsya किनारा भनेर हुड खुलेर खोल्न र बन्द। को फिट देखि कम्बल को घनत्व र दक्षता मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले यो कम्बल छ इन्जिन कक्ष र हावा तह बीच रूपमा, वाहन गरेको हुड सीधा संलग्न गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
विकल्प बारे उपयोगी जानकारी
इन्जिन मा कम्बल, मूल्य तपाईंले केही शक कारण गर्नुपर्छ suspiciously कम छ। पहिले, यो गुणस्तर प्रमाणपत्र को उपलब्धता ध्यान आवश्यक छ। यो दुवै घरेलू र विदेशी उत्पादनहरु लागू हुन्छ। जस्तै निर्माता, उत्पादन र भौतिक नाम जानकारी निर्दिष्ट गर्दछ। यो उत्पादन र यसको प्याकेजिङ्ग सिधै नक्कल गर्नुपर्छ। यो धेरै सरासर नक्कली तपाईं खतरनाक छ कुनै पनि विचलन त्यहाँ देखेको भने, प्रयोग प्रति se कडा, निरुत्साहित गरिएको छ। यो इन्जिन "Avtoteplo" को लागि एक सिद्ध कम्बल चयन गर्न राम्रो छ। यसको मूल्य केही ब्रान्डहरु भन्दा केहि उच्च छ, तर गुणस्तर अक्सर राम्रो छ। यहाँ हुनत यो जाँच गर्न मनमोहक छ।
इन्जिन मा एक गुणवत्ता कम्बल कसरी चयन गर्ने? समीक्षा तपाईं यस मा मदत गर्नेछ। मोटर चालकहरुलाई पहिले नै एक दर्जन निर्माताहरु भन्दा बढी अनुभव गरेका छन्। यो सबै भन्दा राम्रो-सिद्ध छ चेल्याबिन्स्क "Avtoteplo" को कम्पनी। यसलाई अनुकूल छ जसको लागि कार, र प्रदर्शन को मोडेल सूची जो एक पासपोर्ट, जब उत्पादन खरीद सँगसँगै हुनुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् समीक्षाएँ जुन हामीले पहिले नै विचार इन्जिन मा कम्बल, वस्तुतः कम कि गर्दैन र शिथिलता। अन्यथा, यो सानो मा एक बेल्ट वा समय चरखी, र राम्रो मा कपडा मार को सम्भावना छ।
म यसलाई आफैलाई गर्न सक्नुहुन्छ
इन्जिन आफ्नै हात उत्पादन गर्न सक्छन् लागि कम्बल, केही मोटर चालकहरुलाई भर्खरै गर्छन्। कहिलेकाहीं यो मात्र सही निर्णय हो, यो बारेमा सबै थप त जटिल त्यहाँ केही छ। पहिलो तपाईं आकार, त्यसपछि सामाग्री निर्धारण गर्न आवश्यक छ। उपाय इन्जिन कक्ष धेरै सरल छ र यसलाई मात्र एउटा टेप उपाय आवश्यक छ। उच्च गुणस्तरीय चयन सामाग्री सानो प्रयास संग सम्भव पनि छ। यो फ्लैश गर्न आवश्यक हुनेछ रूपमा बाल्न हुँदैन र ढल्छ एक उच्च घनत्व छ। खैर, अर्को महत्त्वपूर्ण अवस्था - एक कार को हुड गर्मी अवधारणा।
हामी ग्लास फाइबर लाग्न सक्छ, जो को विशेषताहरु पहिले नै आधारमा छलफल गरिएको छ। fillers को खनिज ऊन बस्नका लागि राम्रो छ। यो एकदम आशुक्रोधी छ, त्यसैले राम्रो काम रबर पन्जा मा गरेको छ। त्यसपछि सबै सरल छ, लिन र लेपित ग्लास कपडा basalt ऊन। यसलाई ध्यान दिएर र conscientiously सबै गर्न उचित छ। यो एक गुणात्मक फाइबर सिसा बनेको "duvet कवर" बनाउन महत्त्वपूर्ण छ। यो basalt फिट। यो Fabrication मा पूरा भएको छ।
तपाईं एक घर कार इन्जिन लागि कवर बनाउन सक्छ। सकारात्मक रूपमा यो मामला मा समीक्षा। पहिले नै धेरै मोटर चालकहरुलाई गरिरहेका थिए र केही सुझाव दिन र सुविधाहरूको बारेमा बताउन सक्छ। सामान्य मा, त्यहाँ हतार र बलियो मुद्दा प्रयोग गर्न जटिल केही, महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं चिन्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले भर्खरै निकटतम autoshop जानुहोस् र घरेलू निर्माता "Avtoteplo" को उत्पादन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा 1500 rubles लागत। सेवा जीवन अक्सर धेरै वर्ष छ। धेरै मोटर चालकहरुलाई अचानक कार अन्तर्गत प्राप्त गर्न सडक मा लिए भने, प्याड रूपमा कम्बल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सौंदर्य घटक चिन्ता हुँदैन, यो यसको तत्काल कार्य एक कम्बल सम्झौता गर्न थप महत्त्वपूर्ण छ। को न्यानो महिनामा यो यस्तो आवश्यकता बस गायब रूपमा, र थप के, यो कार चोट गर्न सक्छन्, प्रयोग गर्न उचित छ।
कार फोर्ड चाड। समीक्षा
ट्युनिङ सैलून बनाउन: विशेषताहरू
कार DeLorean DMC-12: निर्दिष्टीकरण, फोटो
कसरी DPS कुरा गर्न। चालकहरुको लागि भत्ता
हेडलाइट कम बीम VAZ-2110: प्रकार, चयन, प्रतिस्थापन
"Renault Twingo" - एउटा सानो कृति
अघिल्लो लेजरको अगाडि सिल्सेन्सरहरू कसरी व्यवस्थित छन्
किन खरायो खरायो भनिन्छ? कारण शब्द कथा
एक बच्चा मा गर्मी स्ट्रोक को लक्षण - कारणहरू चेतावनी र नतिजा नामेट
HPE-136: तस्बिर, मालिकको, सुविधाहरू, समीक्षा को समीक्षा। HPE-133 को VPO-136 विपरीत
Elena elena Podkaminskaya: को जीवनी तथ्य को उचाई र तौल
प्रार्थना कस्तो छ, वा begaz को लागि namaz?
शाकाहारी मटर सूप कसरी खाना पकाउनु। शाकाहारी सूप: तस्बिर संग व्यञ्जनहरु
"क्रिसलर पीटी क्रूजर": अवलोकन र विकल्प
सजावटी मलहम को आवेदन। सजावटी प्लास्टर लागू लागि तरिका: कार्यशाला
शीर्ष 5: सबै भन्दा राम्रो hairdressers Cherepovets
सम्पर्कमा हुन सधैं थाह कसरी बीलाईन मा ब्यालेन्स जाँच गर्न, हुनेछ
बाल सदन प्राप्त कसरी गर्न: आमाबाबुको लागि सुझावहरू